दैनिक एउटा सिंगो अण्डा खाँदा मृ’त्यु हुने जो’खिम १४ प्रतिशतले ब’ढ्ने – eSidhakura
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यदैनिक एउटा सिंगो अण्डा खाँदा मृ’त्यु हुने जो’खिम १४ प्रतिशतले ब’ढ्ने
दैनिक एउटा सिंगो अण्डा खाँदा मृ’त्यु हुने जो’खिम १४ प्रतिशतले ब’ढ्ने
काठमाडौं। दैनिक एउटा अण्डा सिंगै खाँदा मृ’त्यु हुने जो’खिम १४ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । पहेंलो भागसहितको अण्डा खाँदा यस्तो जो’खिम बढ्ने अनुसन्धानमा पाइएको छ । यो जो’खिम अण्डा उ’सिनेर, फ्रा’इ गरेर वा अम्लेट बनाएर खाँदा पनि हुनेछ । यो अध्ययनको नेतृत्व गरेका चि’नियाँ अनुसन्धानकर्ताका अनुसार जो’खिम ब’ढाउने कारक अण्डामा हुने उच्च चिल्लो पदार्थ र को’लेस्टेरोल हुन् । अनुसन्धानकर्ताहरुले अण्डाको सेतो भाग मात्र खान वा अण्डाको सट्टा यस्तै पौष्टिक तत्व हुने अन्य खाना खान सुझाव दिएका छन् ।
डेलीमेलको रिपोर्टअनुसार अण्डाको सट्टा सोही अनुपातमा गेडागुडी वा फलफूल खाने गर्दा मृ’त्युको जो’खिम एक तिहाइले घ’टेको पाइएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले ५ लाख भन्दा धेरै अमेरिकीहरुलाई सन् १९९५ र १९९६ मा केही प्रश्नहरुको सू’ची दिएका थिए र उनीहरुलाई १६ वर्षसम्म अ’वलोकन गरेका थिए । यो अध्ययनपछि तयार पारिएको शो’धपत्र प्लस वनमा प्रकाशित गरिएको छ । शो’धपत्रमा १६ वर्षअघि प्रश्नको जवाफ दिएर फा’राम भ’रेका मध्ये अहिलेसम्म १ लाख २९ हजार ३२८ जनाको मृ’त्यु भएको उल्लेख छ ।
शोधकर्ता झे’जियाङ विश्वविद्यालयका प्र’फेसर यू झाङले भने ‘यो अध्ययनमा अण्डा र को’लेस्टेरोलको से’वन मुटुसम्बन्धी रो’ग र क्या’न्सरको कारणसँग सम्बन्धित थिए । अण्डा से’वन गर्नेहरुको बढ्दो मृत्युदर ठूलो परिमाणमा को’लेस्टेरोलबाट प्रेरित थियो ।’स्वास्थ्य र अण्डाको सम्बनधका विषयमा वर्षौं अगाडिदेखि ब’हस हुँदै आएको छ र अण्डालाई लामो समयदेखि स्वस्थ खा’द्यपदार्थ मानिँदै आइएको छ । अण्डालाई अहिले कैयौं देशको राष्ट्रिय पो’षण गा’इडलाइनमा समावेश गरिएको छ । तर यो खाद्यपदार्थ, खा’गसगरी पहेंलो भागमा उच्च को’लेस्टेरोल हुन्छ जुन स्वास्थ्थयको लागि हा’नीकारक मानिएको छ ।
कहाँ हरायो फेवातालको १६ सय रोपनी जमिन ?
केपी ओलीको चाले अर्को क’दम !
कोरोना भाइरससँग ल’ड्न के–के खाने ? जनस्वास्थ्य विज्ञ पाण्डेका सुझाव पढौं [सक्दो शेयर गरौ]
बि’यरले आ’यु ब’ढाउँछ, दूधले रो’ग ब’ढाउँछ धेरै बि’यर पिएमा….
भिजाएर राखेको ज्वानो पानी १२ रोगका लागि ‘रामवाण’
दुध र महको लेपले एकसाथ दिलाउँछ यस्ता पाँच समस्या देखि छु’टकारा ! [विधि सहित]
नुहाउने पानीमा नुन मि’साउनुस्, ह’ट्छ अ’निद्रा देखि ज्वरो सम्म